Shiinaha SNS 4V2 Taxanaha Aluminium Daawaha Solenoid Valve Air Control 5 way 12V 24V 110V 240V Soo-saare iyo Soo-saare | SNS Calool xanuun
SNS 4V2 Taxanaha Aluminium Daawaha Solenoid Valve Air Control 5 way 12V 24V 110V 240V
Ammaanka, ku-habboonaanta, qaabka culeyska fudud ee dareeraha korontada ku shaqeeya ee hawo-mareenka furitaanka iyo xiridda. Fadlan la soco in jihada socodka gaaska iyo nooca iligga la wareegaya uu yahay rakibid sax ah. Jirka weyn ee cimri dhererkiisa, oo ku habboon koronto xakamaynta awoodda pneumatic.
1.Awoodda jirka aluminiumka aluminiumku waa weyn yahay. Jirka waalka wuxuu ka samaysan yahay walxo cusub oo aluminium ah, oo leh caabbinta cadaadiska adag, iska caabbinta daxalka wanaagsan iyo kala-baxa kuleylka degdega ah.
Giraanta wax lagu xiro oo tayo sare leh. Xirmooyinka tayo sare leh ee cimri dherer iyo cimri dheer
3.Halka sare ee waalka. Saliidiin tayo sare leh oo laga soo dhoofiyo dalka si loo hubiyo in loosameeyo loona yareeyo jahwareerka xilliga jimicsiga
Madax-hoosaadka sare ee 4.High. Ka samaysan qalab tayo sare leh oo leh 6 jeer 1 ilbidhiqsi xoog leh iyo jawaab celin soo noqnoqota badan oo loogu talagalay hawlgalka fudud
5. Gariiradda way fududahay in la kala furfuro. Lowska muhiimka ah ee la saari karo, dhaawaca gariiradda waa la beddeli karaa wakhti kasta
Qalabka elektarooniga ah ee tayada sare leh. Gariiradda naxaasku si adag ayey u shaqeyn kartaa muddo dheer, iyo hawlgalka fiilooyinka waa mid fudud. Marka korontadu daaran tahay, nalka LED-ka ayaa la iftiimiyaa.
Dhexdhexaad dhexdhexaad ah Hawada
Habka waxqabadka Duuliye gudaha ah
Tirada meelaha Laba shan-baas Saddex jago Laba shan-baas Saddex jago
Aag isweydaarsi wax ku ool ah 14.00mm² (Cv = 0.78) 12.00mm² (Cv = 0.67) 16.00mm² (Cv = 0.89) 12.00mm² (Cv = 0.67)
La wareego masraxa Qaadashada = soo bixitaanka = qiiqa = G18 Qaadashada = ka badbadis = G1 / 4 qiiqa = G1 / 8
Duubista Uma baahnid
ISTICMAAL cadaadis 0.15∼0.8MPa
Cadaadiska ugu badan ee cadaadiska 1.0MPa
Heerkulka hawlgalka 0∼60 ℃
Baaxadda danab ± 10%
Isticmaalka awoodda AC: 5.5VA DC: 4.8W
Fasalka kuleylka Fasalka F
Heerka ilaalinta IP65 (DINA40050)
Xiriirka korontada Nooca Terminalka
Soo noqnoqoshada ugu badnaan 5 jeer / ilbiriqsi 3 jeer / ilbiriqsi 5 jeer / ilbiriqsi 3 jeer / ilbiriqsi
Waqtiga raaxada ugu gaaban 0.05 ilbidhiqsi
Qalabka ugu muhiimsan Cilmiga Daawaha Aluminium
Hore: SNS Pneumatic Factory HV Taxanaha Gacanta Lever 4 Dekeddaha 3 Meel Xakamaynta Farsamada Qalabka
Xiga: SNS SPEN Series pneumatic one taabto dhexroor 3 dariiqa yareeya yareynta nooca caaga balaastigga si dhakhso leh ugu habeeya isku xiraha tuubada hawada
SNS VTA301 Taxanaha xakamaynta hawada soo noqnoqoshada PT ...
SNS Taxanaha xakamaynta cadaadiska xakamaynta buugga ...
SNS 2VT Taxanaha solenoid naxaas pneumatic h ...
SNS FB2E-V Taxanaha Cunsurka Xakamaynta Caadiga ah ...
SNS 3V1 Taxanaha aluminium tayo sare leh 2 wa ...
SNS Taxanaha tayo sare leh pneumati qiimo jaban ...